Riquelme Oo Sharaxay Sida Ay Barca Ugu Dhutin Doonto Iniesta %
Sida la wada rajaynao Andres Iniesta ayaa waxaa la fahansan yahay inuu qorsheenayo ka dhaqaaqista Bluagrana dhamaadka fasal ciyaareedkan, waana mid kamid ah Cabqritiintii ugu fiicneed kubada cagta taariikhda oo dhan soo marta.
Juan Román Riquelme, oo ah ciyaaryahan hore ee Barcelona ayaa wuxuu aaminsan yahay in hadii Iniesta uu ka tago Barcelona ay wax badan tabi doonto, maadaama uu sheegayo in ay tahay wax aad u adag helitaanka bedalkiisa.
Iniesta ayaa waxaa qandaraaska uu Barca ku joogo uu yahay mid inta ka dhiman nolashiisa ah, laakiin wuxuu dhawaan uu ka dhawaajiyay inuu di.yaar u yahay inuu go’aamiyo mustaqbalkiisa ka hor inta uusan dhamaan xili ciyaareedka.
“Messi iyo Iniesta waa labada ciyaaryahan ee aduunka ugu fiican, maxaa yeelay waxay yihiin kuwa ciyaary walba awood u leh inay wax ay kusoo kordhiyaan,” ayuu xidigii hore ee qaranka Argentina, Riquelme usheegay Jariiradda MARCA ee wadanka Spain.
“Messi waa midka aduunka ugu fiican, taasi ma jirto cid shaki ama dood badan ka geli karta – Iniesta waa ciyaaryahan fahmaya halka kulanka laga haysto islamarkaana wax badan kala furdaamin karta,” ayuu hadalkiisa kusii daray.
“Marka hadii uu ka tago Barcelona, waa ay uxiisi doontaa maxaa yeelay shaqada uu qabanayo oo aysan jirin cid kale oo qaban karta – Mana ahan Barcelona, oo kaliya ee waxaan uxiisi doonta dhamaan bahda kubada cagta,” ayuu hadalkiisa kusoo xiray.